सोधिने प्रश्न - Jinyun आभूषण कं, लिमिटेड
जांच को लागि धन्यवाद।
हामी स्टेनलेस स्टील आभूषण निर्माता र थोक व्यापारी हो, त्यसैले हाम्रो moq USD 300, प्रति आकार3प्रति डिजाइन पीसी छ।
तर परीक्षण गर्न तपाईं साँच्चै नमूना आवश्यक छ भने, तपाईं आदेश गर्न सक्नुहुन्छ USD 100 मा कम से कम, ढुवानी लागत 1 किलो बारे USD 30 छ।
हामी राम्रो व्यापार र मित्रता निर्माण गर्न सक्छन् इच्छा।
हामी सधैं आफ्नो प्रश्नहरूको जवाफ हातमा कसैले छ। हामी ग्राहक सेवा को Timeliness विश्वास र हाम्रो ग्राहकहरु पूरा गर्न सम्भव सबै गर्नेछ। कुनै पनि समस्या, टिप्पणी, वा सुझाव छ भने, हाम्रो साथ सम्पर्क गर्नुहोस्।
सदस्यताको स्तर: (तपाईंको अर्डर रकम accoring, तपाईं फरक स्तर disccount पाउनेछन्)
हामी हरेक दिन थप र थप आदेश प्राप्त गरेका लागि, हामीले हाम्रो ग्राहकहरु को लागि एक राम्रो सेवा प्रदान गर्न र हाम्रो ग्राहकहरु समयमा आदेश प्राप्त गर्न निश्चित गर्न हाम्रो काम प्रक्रिया समायोजित।
: निम्न हाम्रो नयाँ काम कदम हो
(गर्न Bejing समय अनुसार)
12:00 दिउँसो अघि पहिले नै भुक्तानी जुन सबै नयाँ आदेश लागि, हामी व्यवस्था र त्यसै दिन मा स्टक जाँच गर्नेछ, हरेक बिहान 1।
तपाईं 12:00 दिउँसो पछि भुक्तानी भने, हामी यसलाई व्यवस्था र अर्को दिन शेयर जाँच गर्नेछ।
2. तपाईं 6:00 अघि अन्तिम भुक्तानी गर्न सक्छन् भने हामी बाहिर नै साँझ क्रम जहाज गर्न सक्छन्, पैकिंग सूची प्राप्त गरेपछि।
तपाईं 6:00 बजे पछि भुक्तानी बनाउन भने, हामी अर्को दिन आदेश बाहिर सिप हुनेछ।
तपाईं 12:00 दिउँसो अघि ब्यालेन्स पूरा गर्नको लागि आदेश थप्दा गरेका छन् भने, पहिले नै भुक्तानी गर्दै जो आदेश 3.For, हामीले तपाईंलाई नै साँझ अन्तिम पैकिंग सूची पठाउन र अर्को दिन आदेश बाहिर सिप हुनेछ।
तपाईं 12:00 दिउँसो पछि ब्यालेन्स पूरा लागि थप अर्डर गरेका छन् भने, हामी थप अर्डर व्यवस्था र तपाईं अर्को दिन अन्तिम पैकिंग सूची पठाउन र आदेश भोलि पछि बाहिर जहाज हुनेछ।
तपाईं अर्डर बनाउन अघि, कृपया कृपया तपाईंको आफ्नै अवस्था अनुसार समय व्यवस्था।
तपाईं कारण कुनै पनि सुविधाको लागि माफ गर्नुहोस्।
तपाईं कुनै प्रश्न छ भने, कृपया हामीलाई साथ सम्पर्क गर्न नहिच्किचाउनुहोस्।
Paypal खाता: julong@julongsteeljewelry.com
तपाईं प्राप्तकर्ताको नाम जाँच गर्न, पश्चिमी संघ द्वारा भुक्तानी अघि कृपया हाम्रो साथ सम्पर्क गर्नुहोस्।
बैंक स्थानान्तरण सूचना
बैंक नाम: एचएसबीसी
कम्पनी को नाम: Jinyun व्यापार लिमिटेड
बैंक खाता छैन। : 801406885838
प्राप्तकर्ता बैंक: 1 रानी गरेको रोड केन्द्रीय, हङकङ
हामी संसारमा कुनै पनि ठेगानामा जहाज।
ईएमएस वा टीएनटी वा डीएचएल वा FedEx वा यूपीएस हामीलाई मार्फत आदेश वस्तु ढुवानी छन्।
हामी चाँडै तपाईँको अर्डर हामी एक्सप्रेस कम्पनी बाट प्राप्त गर्दा बाहिर पठाइएको छ रूपमा ई-मेल द्वारा न ट्रयाक संग सूचित हुनेछ।
सडक ठेगाना वितरण लागि आवश्यक छ।
व्यापारिक लगभग 3-5 काम दिन लाग्छ जो ढोका, गर्न मानक एयर-एक्सप्रेस ढोका वितरण गरिनेछ।
वितरण समय प्रक्रिया समावेश छैन।
हाम्रो उत्पादनहरु बाहिर बिदा बाहेक सोमवार देखि शनिवार हरेक दिन पठाइएको छन्। सप्ताहन्तमा मा राखिएको आदेश निम्न सोमवार पठाइएको गरिनेछ गर्दा सबैभन्दा आदेश हप्तादिन राखिएको,2वा3दिन मा पठाइएको गरिनेछ। तपाईंले आफ्नो ट्र्याकिङ नम्बर एक ई-मेल पुष्टि प्राप्त गर्नेछ। बीस-चार घन्टा तपाईंले आफ्नो ट्र्याकिङ नम्बर प्राप्त गरेपछि, तपाईं मा अनलाइन आफ्नो अर्डर ट्रयाक गर्न सक्षम हुनेछ
वितरण समय गन्तव्य को देश मा फरक।
व्यावसायिक विश्वव्यापी ढोका-को ढोका वितरण प्रदान गर्न डीएचएल, यूपीएस, FedEx र टीएनटी: jinyun आभूषण अप सबै ठूलो चार ढुवानी कम्पनीहरु संग ठोस साझेदारी निर्माण गरेको छ।
तपाईं जाँच गरेपछि वस्तुहरू निम्न व्यापार दिनमा बाहिर पठाइएको गरिनेछ। सामान्य मा, यो बारेमा 3-5 व्यापार दिन वितरण को लागि, विभिन्न वितरण आधारमा तपाईं चयन अर्थ लाग्न सक्छ। हामी गलत वा undeliverable ठेगाना लागि जिम्मेवार छैन। तपाईंको ढुवानी ठेगाना सही र बितरण छ पक्का गर्नुहोस्।
हामी तपाईंलाई एउटा माउस को क्लिक आफ्नो अर्डर ट्र्याक गर्न अनुमति दिन्छ। तपाईंको ढुवानी पुष्टि हुन्छ, तपाईंले आफ्नो पुष्टि ई-मेल मा एक ट्रयाक नम्बर प्राप्त गर्नेछ।
मेरो वस्तु मलाई पुग्न लागि यो कसरी लामो हुनेछ?
कृपया ध्यान दिनुहोस् शनिबार, आइतबार र सार्वजनिक बिदा बाहेक व्यापार दिन, वितरण अवधि मामलामा गणना हुन्छन्। सामान्य मा, यो वितरण बारे 3-5 व्यापार दिन लाग्छ।
म मेरो ढुवानी कसरी ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ?
हामी तपाईंलाई जाँच-बाहिर गरेपछि अर्को व्यापार दिन को अन्त गर्नु अघि आफ्नो खरीद जहाज। तपाईं वाहक 'वेबसाइट आफ्नो वितरण को प्रगति जाँच गर्न सक्छन् हामी ट्रयाकिङ नम्बर एक ई-मेल पठाउन हुनेछ।
म मेरो ढुवानी आएको कहिल्यै भने के गर्नुपर्छ?
आफ्नो वस्तु वितरण गर्न को लागि कृपया 10 व्यापार दिन अनुमति दिन्छ। यदि यो अझै पनि आइपुग्छन् छैन, कृपया वेबसाइटमा "हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्" बटन क्लिक गरेर हामीलाई पुग्न। हामी चाँडै फिर्ता प्राप्त हुनेछ।